आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ७ प्रतिशत, यसअघिका दुईवटै लक्ष्य पुरा भएनन्
आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ७ प्रतिशत, यसअघिका दुईवटै लक्ष्य पुरा भएनन् उच्च अंकको आर्थिक वृद्धिमा कोरोना बाधक
अरुण सापकोटा बिहीबार, जेठ १५, २०७७, १९:०९
काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर विगत तीन वर्षको औषत ७ प्रतिशतले हुने लक्ष्य राखिएको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा यदि कोरोनाको प्रभाव न्यून हुँदै गएमा र बजेट कार्यान्वयन भएमा ७ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको हो।
भूकम्पपछि उच्च अंकले बढिरहेको नेपालको आर्थिक वृद्धिदर कोरोना भाइरसको कारणले धेरै कम हुने देखिएको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दा चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ८.५ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने अनुमान गरेका थिए। बजेटमा ८.५ प्रतिशतको वृद्धि हुने अनुमान गरिए पनि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले यस वर्षको आर्थिक वृद्धिदर २.२८ प्रतिशतमा सिमित हुने बताएको छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि लकडाउन गरिरहेको छ। अझै यसले कहिलेसम्म निरन्तरता पाउने हो टुङ्गो छैन। त्यसैले विभागले गरेको अनुमानभन्दा पनि तल झर्ने विश्लेषण हुँदै आएको छ।
गत वर्ष नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ‘जिडिपी’६.३ प्रतिशत थियो। खतिवडाले गएका दुई वर्षमा लिएको लक्ष्य हासिल हुन सकेन। उनले आफ्नो पहिलो बजेटबाट यदि आफ्नो बजेट पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएमा आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत हुने अनुमान गरेका थिए तर ६.३ प्रतिशतमात्रै हासिल भयो। त्यस्तै दोस्रो बजेट कार्यान्वयन भएको खण्डमा ८.५ प्रतिशत हुने अनुमान गरेता पनि २.२८ प्रतिशत मात्रै हुने आँकलन गरिएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को ६ देखि ८ महिनासम्मका आर्थिक क्षेत्रहरूसँग सम्बन्धित आँकडा तथा सूचनाहरू एवं बाँकी अवधिको विश्वव्यापी महामारी कोभिड–१९ को संक्रमणबाट जोगाउन गरिएको प्रयासबाट आर्थिक क्रियाकलापमा पर्न गएको नकारात्मक असरलाई समेत मध्यनजर गर्दै तथ्याङ्क विभागले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वस्तु तथा सेवाको उत्पादनको प्रारम्भिक अनुमान र प्राप्त संशोधित तथ्याङ्कका आधारमा विगत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को संशोधित अनुमान समेत प्रकाशित गर्‍यो।
विभागले चालु आर्थिक वर्षका वस्तु तथा सेवाको उत्पादनको अनुमान तथा सूचकहरू तयार गर्दा होटल तथा रेष्टुरेन्ट र अन्तर्राष्ट्रिय यातायात क्षेत्र यसको आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा अत्यधिक प्रभावित हुने तथा अन्य क्षेत्रका आर्थिक गतिविधि जेठबाट क्रमशः नियमित हुने विश्वास गरिएको थियो। तर अझै अवस्था सामान्य बन्न सकेको छैन। अझै केही समय यस्तै अवस्थामा रहने देखिन्छ। यसले गर्दा अर्को पटक तथ्याङ्क विभागले गर्नु अनुमान अझ कम हुने निश्चित छ।
स्थिर सरकार भएकाले काम फटाफट हुने र खतिवडाले लिएको लक्ष्य पुरा हुने अर्थशास्त्रीको विश्लेषण पनि फेल खाएको छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले यो सरकार पहिलेको जस्तो नभएको र बजेट विनियोजन पहिलेको जस्तै पनि नभएको हुँदा आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य कुनै हालतमा पुरा गरिछाड्ने दाबी गरेका थिए। गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पुरा भए म मरिदिन्छु भन्ने पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको टिप्पणीलाई खतिवडाले 'म उहाँलाई मर्न दिन्न एक कम गरेर भए पनि पुरा गर्छु भन्ने जवाफ दिएका थिए।'
अर्थमन्त्री खतिवडाले ‘यो सरकार पहिलेको जस्तो होइन र बजेट विनियोजन पहिलेको जस्तो छैन’ भन्दै आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य कुनै हालतमा पुरा गरिछाड्ने दाबी गरेका थिए।
आर्थिक वर्ष २०३७/३८ मा अहिलेसम्मकै उच्च अंकको आर्थिक वृद्धि भएको पाइन्छ। उक्त वर्ष ८.९ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि भएको थियो। तर उक्त वृद्धिदरले निरन्तरता भने पाउन सकेन।
विगत सात वर्षको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य र उपलब्धी
आर्थिकवृद्धिदरको लक्ष्य र उपलब्धी
विगत २० वर्षको आर्थिक वृद्धिदर